Maitiro ekutamba Minecraft paGNU / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Minecraft mutambo wevhidhiyo wekuvaka uyo, kusiyana nemimwe mitambo, inozivikanwa nekuve nekupa mukana wekubatanidza online. Minecraft zvakare inotibvumidza isu kugadzira nharaunda zvichibva nezviitiko zvatinoita, nenzira yekuti vashandisi vagadzire zviitiko uye vatambe navo neshamwari dzinoverengeka vari kure.
Yakabatana neizvi, Minecraft ine kugona kuvaka chero chero chinhu chine chinhu chimwe chete: iyo cube. Ichi chinhu chekuvaka uye miganho yemutambo wevhidhiyo zvakaita kuti Minecraft chishandiso chikuru chenyika yekudzidzisa, chiri chishandiso chekuzivisa vadiki kune nyika dzezvisikwa uye zvirongwa.
Minecraft yakagadzirwa muna 2009, Kubva ipapo, mazana ezviuru emakopi akatengeswa uye mamirioni evashandisi vakatora chikamu mumaseva ayo. Iko mashandiro emutambo uyu haubvi pane imwe injini yemutambo kana kumwe kushanda asi pane server-mutengi mashandiro, ayo akaita kuti mutambo uyu usvike pamapuratifomu akadai sePlayStation 4 kana GNU / Linux.
Muna 2014 kambani yakagadzira Minecraft yakatengeswa kuMicrosoft uye nayo mutambo wevhidhiyo. Izvi zvave kureva kuti mutambo wacho une imwe solvency yehupfumi uye kuti inosvika pamapuratifomu ayo kusvika parizvino anga asati asvika zviri pamutemo. Muenzaniso weiyi yaive GNU / Linux chikuva. Ipuratifomu iyo Minecraft yaiziva asi zvisiri pamutemo kana kuburikidza newebhu webhu, asi mushure mekutenga uku, Microsoft yakaparura yepamutemo mutengi yakanyorwa muJava iyo yaishanda pane chero GNU / Linux kugovera.
1 Ndedzipi dzimwe nzira dziripo kune Minecraft yeGNU / Linux?
2 Chii chatinoda kuisa Minecraft paGNU / Linux?
3 Maitiro ekuisa Minecraft paGNU / Linux?
4 Minecraft yakakosha here?
Ndedzipi dzimwe nzira dziripo kune Minecraft yeGNU / Linux?
Tiri kukuudza maitiro ekuisa iyo yepamutemo mutengi kune ino inozivikanwa dhizaini yekuvaka, asi kudzamara mutengi uyu abuda, iyo GNU / Linux nharaunda yakagadzira akasiyana maclones kana avo mavhezheni eiyi inozivikanwa vhidhiyo mutambo. Tevere isu tichaenda kutaura nezve inonyanya kufarirwa vatengi veGNU / Linux.
Imwe yedzakanakisa nzira kune Minecraft, ingangoita imwe nzira inonyanya kufanana neMinecraft, inonzi minetest. Ichi chishandiso Izvo zvakada kufanana neMinecraft asi nedzimwe shanduko nekuda kwezvikonzero zviri pamutemo. Kusiyana nezvimwe zvishandiso, minetest Iyo ine yayo yekuchengetera uye Yakavhurika Sosi, iyo inotibvumidza isu kuti tigadzire yedu yega vhezheni yechirongwa ichi kana tichida.
Imwe nzira yechipiri inonzi Terasology, mod kana vhezheni yeMinecraft yakavandudzwa, zvirinani mune yakajeka mufananidzo. Terasology zvakare yemahara Open Source chirongwa, senge chishandiso chakapfuura uye izvi zvinoreva kuti isu tinokwanisa kugadzira yedu yega projekiti zvichibva pairi. Terasology ine chitarisiko chakanyatso tsanangurwa chezvinhu zvakasikwa senge mvura, jecha kana huswa, izvo zvinogadzira mutengi uyu anogona kusashanda nemazvo pamachina ane zviwanikwa zvishoma. Chinhu chakashata icho kana Minecraft kana Minetest isina.
Imwe nzira yechitatu inonzi free mugodhi, imwe nzira izvo zvinotarisa mukugadzira zvisina musoro uye zvinonakidza zviitiko pane kuve nemasimba ekuvaka maturusi. Mavara ayo haana kunaka seTeraeraology uye haipe kuvimbika kwakanyanya kune yekutanga vhidhiyo mutambo, asi chinangwa chemutambo chinochizadzisa zvakakwana.
Chii chatinoda kuisa Minecraft paGNU / Linux?
Vatatu vatengi kana shanduro dzeMinecraft dzakazara kwazvo uye dzakanaka kwazvo shanduro, asi kana tiri vatambi vemapuratifomu uye sezvo Microsoft yatanga mutambi uyu muJava, chinhu chakanakisa ikozvino kusarudza kushandisa mutambo wekutanga. Kuisa Minecraft pane yedu GNU / Linux kugovera isu tinenge tichinyanya kuda zvinhu zviviri: account pane maMinecraft maseva uye iine Java yakaiswa kumhanya mutengi.
Kuti tiwane yekutanga, isu tinofanirwa kuenda kune yepamutemo webhusaiti yemavhidhiyo mutambo uye kunyoresa sevashandisi veMinecraft. Kana tangozadza ruzivo rwese, iyo webhusaiti yekunyoresa ichatitumira kodhi yekuchengetedza kuemail yedu iyo webhu application ichatikumbira kuti tipinde uye tiongorore kuzivikanwa kwedu uye kuti isu hatisi marobhoti. Iye zvino skrini ichaonekwa kwatinofanira kuisa kiredhiti kadhi kubhadhara kushandiswa kweMinecraft. Tinogona kushandisa izvi kana kungotenga zvikwereti zvemakadhi. Tinogona zvakare kusvetuka danho iri uye kurisiya risina chinhu. Chimwe chinhu chingaitwe kubvira iyo yekutanga Microsoft mutambo inokupa iwe yemahara 5-zuva demo account.
Izvozvi zvatave neakaundi akagadzirwa tinofanirwa kuve neJava kana yayo yemahara yakaenzana mune yedu GNU / Linux kugovera. Mune ino kesi, isu takasarudza kuisa iyo yakavhurwa sosi vhezheni yeJava, asi kana iwe uchida iwe unogona kuisa yakavanzika uye yekutanga vhezheni yeJava kuburikidza ichi chinyorwa. Kuti tiise izvi, isu tinofanirwa kuvhura terminal uye tinyore zvinotevera:
Kana isu tinonyora zvinotevera kana tiine Fedora, OpenSUSE, Red Hat kana zvigadzirwa:
Mushure mekumirira maminetsi mashoma tichava neJava, kana kuti zvirinani iro rakavhurika sosi vhezheni yeJava mune yedu GNU / Linux kugovera. Isu tatova nezvose zvaunoda kuti uise iyo yepamutemo mutengi kune ino inozivikanwa block block mutambo.
Maitiro ekuisa Minecraft paGNU / Linux?
Iyo Minecraft mutambo inoshandisa hombe server iyo vashandisi vanobatana nayo kuburikidza nevatengi zvirongwa. Minecraft ndeyaMicrosoft saka pane mutengi akagadzirwa yeWindows asi yemamwe mapuratifomu mutengi multiplatform akagadzirwa muJava anofanira kushandiswa sezvo pasina yega vhezheni yepuratifomu (zvirinani yeGNU / Linux haipo). Tinogona kuwana mutengi uyu kubva pano. Kana tangozvirodha pasi, tinovhura chinongedzo mufaira kuti isu tine iyo yekumisikidza yekuisa package uye isu tinoita inotevera kodhi
Mushure mekuita izvi, hwindo senge rinotevera rinovhura:
Muhwindo iri tinofanirwa kuisa zvitupa zvedu zvevashandisi uye rinosangana kune yepamutemo Minecraft server. Zvichida, chinhu chekutanga chinobvunzwa nemutengi kwauri ndechekuvandudza chirongwa chavo, chimwe chinhu chatinokurudzira kwete chete kuti mutengi ashande asi kuve nemabatiro ari nani evatengi. Izvi hazvizo gadza mutengi mukugovera kwedu, saka pese pese patinoda kutamba tinofanirwa kudzokorora nhanho yapfuura yekumhanyisa application mutengi. Mushure mekuvandudza mutengi watakaisa, isu tichakwanisa kubatana zvakananga kumutambo uye kunakidzwa neveMinecraft nyika, nematurusi ayo ekuvaka uye nekugadzira zvitsva zvitsva.
Minecraft yakakosha here?
Isu takaona kuti chii chinonzi Minecraft, kuti ungaiwana sei uye kuti ungaiisa sei paGNU / Linux, asi zvirokwazvo vazhinji venyu muchashamisika kana mutambo wekutanga iri sarudzo yakanaka kana kuti zvirinani kusarudza mimwe mitambo yekuvaka iripo yeiyo penguin chikuva.
Ini pachangu ndinotenda izvozvo Kana isu tichinetseka nezvemari, Minecraft haisi sarudzo yakanakisa yemitambo yekuvaka, asi Kana isu tisina hanya chaizvo nemari kana kubhadhara marezinesi ekutamba, saka Minecraft nemutengi wayo wepamutemo ndiyo sarudzo yakanakisa iripo. kunakidzwa nemutambo wekuvaka, sezvo uchipa mhinduro yekukurumidza uye yakapusa yekuvaraidza, pasina mamwe marekodhi kana mamwe mapulagini.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Maitiro ekutamba Minecraft paGNU / Linux
Mario Alberto akadaro
Iko kune .deb package ye debian / ubuntu, yakanyanya nyore kuisa mu ubuntu 18, unongotora pasi pasuru uye woiudza kuti isa uye enda
Pindura kuna Mario Alberto